यसरी भइरहेछ मानव खप्परको तस्करी (भिडियो रिपोर्ट), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यसरी भइरहेछ मानव खप्परको तस्करी (भिडियो रिपोर्ट)
काठमाडौँ। मानव खप्परजस्तो अतिसंवेदनशील वस्तुको पनि कारोबार हुने गरेको छ । मानव खप्परसँग जोडिएका विभिन्न अन्धविश्वासका कारण यसको किनबेच हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीले मानव खप्परसहित दुईजना युवालाई गत शनिबार काठमाडौंबाट पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट खटिएको विशेष टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । दुवैका साथबाट एकथान मानव खप्पर बरामद भयो । तन्त्र जगाउन भन्दै उनीहरूले मानव खप्पर लुकाएर राखेका थिए।
पूरा जानकारीको लागि भिडियो हेर्नुस्।